Ahoana ny fomba hanampiana sy hanaovana ebook mifanaraka amin'ny Kindle anao amin'ny alàlan'ny Telegram | Vaovao momba ny gadget
Na dia te hanana ny mofomamy avy amin'ny indostrian'ny e-book aza i Apple sy ny orinasa hafa, dia marina ihany koa fa nisy mpanjaka foana teo amin'ity tsena ity: Amazon sy ny sehatra Kindle. Ilay goavana e-varotra dia nahalala foana ny fananana katalaogy lehibe misy lohateny niomerika ary koa - ary tsy latsa-danja amin'izany - manome ny fitaovana ho an'ny mpanjifany mba hahafahan'izy ireo mankafy boky amin'ny mora.
Ny tena marina dia midika hoe ny Kindle sy ny karazany isan-karazany. Ekipa izy ireo manolora traikefa tsara ho an'ny mpampiasa ary aza manasatra ny masonao raha iray amin'ireo mamaky ora maro ianao: Mampiasa teknolojia fanoratana elektronika izy ireo. Ankehitriny, toy ny mahazatra dia misy "fa" amin'ny fampiasana azy. Ary voaheloka ianao hampiasa ebook foana amin'ny endriny.
Araka ny efa nanamarihana imbetsaka, ary araka ny nolazain'i Amazon tamin'ny fotoana maro, ny orinasa dia mahazo tombony amin'ny serivisiny fa tsy amin'ny fitaovana amidiny. Ary toa tsy mandeha amin'ny laoniny ny raharaha. Na izany aza, Ny iray amin'ireo "fahasarotana" lehibe amin'ny Kindle dia ny endrika anohanany dia .MOBI. Ary raha mahazatra an'ity karazana boky elektronika ity ianao dia ho fantatrao fa misy endrika samihafa eny an-tsena ary aseho ireo sehatra varotra hafa. Midika izahay fa .EPUB. Inona no hitranga raha mividy boky elektronika ianao - ebook - ivelan'i Amazon ary manana Kindle? Ny valiny dia tsy manantena be loatra: na tsy mankafy ny lohateny sintonina ianao; sa mitady mpamaky hafa ianao; na avadiho ho endrika iray mifanaraka amin'ny Kindle izany endrika izany. Ary mora be izany raha mampiasa bot avy amin'ny serivisy fandefasan-kafatra mailaka malaza Telegram izahay.
1 To Kindle Bot: inona no ilainao hanombohana mampiasa azy
2 Mametraha Kindle To Bot ao amin'ny kaontinao Telegram
3 Manomboka mampiasa "To Kindle Bot" amin'ny Telegram
To Kindle Bot: inona no ilainao hanombohana mampiasa azy
Raha mbola mieritreritra ianao fa Telegram dia serivisy fandefasana hafatra eo noho eo, dia tena diso ianao. Eny, eny, izany koa. Saingy ity serivisy ity dia manana fahafaha-manao betsaka kokoa noho ny eritreretinao. Ho fanampin'ny fananana fantsona amin'ny lohahevitra rehetra mahaliana anao - eny, mora tohina ihany koa amin'ny fandefasana fitaovana manana zon'ny mpamorona-, izy io koa dia manana fitaovana mahaliana toy ilay atolotray anao anio: Handrehitra Bot.
Ireto botsika ireto dia rindranasa avy amin'ny antoko fahatelo izay miasa ao anatin'ny ekolojia i Telegram. Ary amin'ity tranga manokana ity dia miasa miaraka amin'ny kaontinao Kindle, ilay iray izay sokafanao voalohany rehefa manomboka mampiasa ny sehatra famakiana nomerika an'i Amazon ianao. Aleo ampidino ny telegram amin'ny sehatra safidinao. Aza adino fa afaka mampiasa azy io amin'ny alàlan'ny browser-nao ianao na misintona ny rindranasa birao ary afaka mampiasa azy amin'ny solosainao. Izany dia nilaza fa hanao izany ianao hametraka ny To Kindle Bot amin'ny kaontinao ary manomboka ampiasao. Fa inona no ilainao hamboarina azy?
Mametraha Kindle To Bot ao amin'ny kaontinao Telegram
Hisy zavatra roa izay angatahin'ity Telegram Bot tany am-boalohany ity hanombohanao hampiasa azy. Inona koa, raha vao ampidirinao ao amin'ny kaontinao izany dia ho hitanao ny fisian'ny torolàlana amin'ny teny anglisy. Inona no angatahiny aminao? Ny zavatra voalohany dia mamaly ianao mandefa ny kaontinao Kindle ho anao manokana. Izany hoe ilay manana ity firafitra manaraka ity: username@kindle.com. Mba hahitana raha tena adiresy mailaka anao manokana, midira ao amin'ny kaontinao Amazon ary mankanesa any amin'ny fizarana menio mitete "Tantano ny atiny sy ny fitaovana".
Hiseho ny takelaka samihafa, ny farany dia ilay manondro "Fikirana". Tsindrio eo io sy ao amin'ilay faritra «Fanamboarana antontan-taratasy manokana» ho hitanao ny fampahalalana momba ny kaontinao @ kindle.com. Raha vao mandefa ity kaonty ity any amin'ny Bot (To Kindle Bot) ianao, dia efa tonga ny fotoana hanampiana kaonty mailaka omen'ity serivisy ity anao.
Ity kaonty ity dia tsy maintsy ampiana amin'ny fizarana «Lisitry ny adiresy mailaka nahazo alalana handefasana antontan-taratasy manokana». Ity safidy ity dia ambany kely kokoa noho ny dingana teo aloha. Hamarino ianao fa hita koa ny kaonty mailaka anao. Ampidiro ilay kaonty mailaka milaza aminao To Kindle Bot ary dia izay.
Manomboka mampiasa "To Kindle Bot" amin'ny Telegram
Ho tonga ny fotoana hanombohana ny fampiasana azy. Angony ireo boky ao amin'ny .EPUB, ohatra, izay tianao hivadika hahafahanao mamaky azy avy amin'ny mpamaky Kindle anao. Alefaso any amin'ny Bot ny fisie ary tsy maharitra mihoatra ny roa minitra ny fiovam-po. Inona no mitranga avy eo? Ny dingana rehetra teo aloha izay nataonay mba hametrahana ity Bot ity dia ny fiantohana fa rehefa vita ny fiovam-po amin'ny endrika .MOBI dia ampidirina ho azy ao amin'ny kaontinao Kindle ny boky.
Tsy maintsy miandry roa minitra ianao vao hiseho ilay boky. Ary hanao izany ao amin'ny fizarana antontan-taratasy Kindle; izany hoe amin'ny toerana iray ihany izay andefasana ny karazan-drakitra rehetra - mazàna amin'ny endrika PDF - hojerena avy amin'ny mpamaky boky malaza. Farany, tadidio io Kindle io azo ampiasaina samy ao amin'ny mpamaky boky, ao a takelaka amin'ny alàlan'ny fampiharana ofisialy, ao amin'ny a finday avo lenta na avy amin'ny solosaina.
* Fanamarihana: avy amin'ny Actualidad Gadget dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fampiasana izay nomena an'ity Bot ity izahay. Fantatray fa ny fitaovana rehetra hampiova finoana dia azo ara-dalàna
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tutorials » Ahoana ny fomba fampidirana sy fanaovana ebook mifanaraka amin'ny Kindle anao amin'ny alàlan'ny Telegram
Javier Mercadé dia hoy izy:
Milaza amiko ilay bot fa tsy mahavita afa-tsy fiovam-po 5 isam-bolana aho ...
Valiny tamin'i Javier Mercadé